Yaa Qufulay Dugsiga Sarre Ee Suldaan Maxamed Suldaan Faarax....? W/Q:-Maxamed Yuusuf Cabdi (Ridha)
(Hadhwanaagnews) Thursday, September 13, 2018 03:24:39
Waagii baryaaba waayo leh, waxay ahayd Sabtidii todobaakan aynu ku jirno, markii ay Ardaydii u soo diyaar garawday waxbarashadii maalin laha ahayd iyo Dugsigoodii Sare ee Suldaan Maxamed Secondary School, mar qudha lagu war galiyay in Dugsiga la xidhay iyadoon waxa sabay loo sheegin. Yaabkii iyo amakaagii ku dhacay Ardaydaas subaxaas hore ee Sabti iyo war warkii iyo walaacii ku habsaday waxa qiyaasi karayay uun qof joogay goobtaas.
Bal hada u fiirso waxan dhacay, goobtu waa Dugsi sare oo dawladeed, sifo sharci ah laguma xidhin, masuul Wasaarada Waxbarashada ka socdaa muu joogin, lama siinin Ardayda bedel sharci ah oo ay Dugsigayada
kale ku tagaan, maamulkii Ardayda ku war galiyay in Dugsiga la xidhay waxaan intaa ahayn umuu sheegin, hadaynu nidhaahno Wasaaradu may ogayn xadhiga Dugsiga ilaa imika wax hadal ama ficil ah lagama hayo, yaab iyo yaabka yaabkii.
Waxaa ka sii daran taas Ardaydii mustaqbalkoodii la khiyaameeyay waxay iyagoo haad geed waayay ah dhex wareegayaan Dugsiyada Sare ee Hargaysa ku yaala, gaar ahaan Waaxaha Axmed-Dhagax iyo 26-Juun iyagoon wax bedel ah haysanin.
Su’aalahan ayaa wax ka jawaaba u baahan, si loo ogaado sababta dhabta ah ee jirta—-?
1-Horta Dugsiga yaa awooda lagu xidhay iska lahaa, ma Wasaarada Waxbarashada mise Maamulkii meesha joogay—————-?
2-Waaa maxay sababta dhabta ah ee Dugsiga loo xidhay, ma duruuf mise dan gaara——?
3-Maxay ilaa imika Wasaaradu uga aamusantay arinka, mise Dugsigaba dawli muu ahayne waa lagu sawiruun inuu Wasaaradu maamusho————-?
4-Mise, sidii Dugsigii Xalane ee inta Ardaydii laga saaray Turkey qawlaysato ah la siiyay, ayaa maantana Dugsigan Ardaydii laga dareeriyay la siin doonaa qawlaysato kale—————-?
5-Ugu danbayn, maye waalidkii Ardaydu iyo wax-garadkii iyo odoyaashii deegaanka deggenaa, tanina waa mushkilad soo kordhay e————–?
W/Q:-Maxamed Yuusuf Cabdi (Ridha)